साउनमा व्रत बस्नु, मासु नखानु भगवानलाई खुसी तुल्याउन मात्र होइन, व्यवहारिक कारण छन् | Seto Khabar
काठमाडाैं । साउन महिनालाई विशेष पवित्र महिनाको रुपमा हेरिने गरेको छ । यस महिनालाई महिलाहरुले भने विशेष चाडकै रुपमा लिने गरेको छन् । विशेषत हिन्दुधर्मलम्बीहरुको लागि साउन विशेष हुन्छ । यस महिनाको सोमवार महादेवको व्रतबस्ने प्रचलन पनि रहि आएको छ भने यस महिनामा माछा मासु नखाने चलन पनि रहेको छ । साउन महिना, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना । यो महिनामा केही धार्मिक पर्वहरु पनि पर्छ । यो बोलबमको महिना हो । भगवान शिवको आरधानाको महिना हो । उपवासको महिना हो ।
साउने सोमबार विद्याका लागि पनि राम्रो मानिन्छ । शिवजीको पूजा–आरधना गर्दा महिलाहरुलाई असल श्रीमान प्राप्त हुने, व्यापार राम्रो हुने एवं किसानको खेतीपाती सप्रने विश्वास गरिन्छ । साउन महिनामा बढी वर्षा हुने , झरी पर्ने र किटाणुको संक्रमण हुने हुँदा तुलो फाल्ने चलन पनि छ । यो समयमा रोगहरु लाग्ने बढी सम्भावना भएकाले मासु,लसुन एवं उत्तेजित हुने खाना खानु हुदैन । पहिले महिलाहरु साउनमा आफुसंग भएका गरगहना, साडी, टीका, लगाई सजिने तथा सोमबार चोखो खाएर ब्रत बस्ने चलन थियो ।
आज असोज ०४ गते सोमबार कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् ! राशिफल
पोखरा महानगरको बजेट खर्च ६६ प्रतिशत